Hordhac : Liverpool vs Bournemouth halkan ka aqriso wax kasto oo ku saabsan kulanka . – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Hordhac : Liverpool vs Bournemouth halkan ka aqriso wax kasto oo ku saabsan kulanka .
Sabti, Feberaayo, 9, 2019 (HNN)- Kooxda kubada cagta Liverpool ayaa wajihi doonta kooxda Bournemouth xili kooxda city ay la wareegtay hogaanka horyaalka premier league , laakiin guul ayaa gaaraan ay u sahli karta in ay dib ugu soo laabtaa hogaanka sare ee horyaalka.
Liverpool ayaa badin labadii kulan ee ugu dambeeyey ee ay soo ciyaartay horyaalka waxa ayna qasaariyeen afar dhibcood , muhiimad ugu weyn ee reds ayaa ah in ay badiyaan .
Wararka labada koox ka hor kulanka .
Liverpool ayaa heleysa Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum iyo Trent Alexander-Arnold kuwaas oo dhamaantod dib ugu soo labtay taba barka buuxa ee kooxda waxa ayna qeeb ka yihiin safka wajahaya kooxda Bournemouth, balse Dejan Lovren diyaar uma ahan in uu kulanka ciyaara .
Bournemouth ayaa weeyi doonta adeega xidigeheeda Callum Wilson iyo David Brooks, halka Jefferson Lerma oo dhaawac ka qaba canqowga caafimaadkiisa la tijaabin doono .
Dominic Solanke ayaa rajeenaya in uu wajaho markii ugu horeysay kooxdiisii hore ee Liverpool , balse Nathaniel Clyne oo isna qaab amah ah u jooga Bournemouth ayuusan sharciga u ogoleen in uu kooxdiisa ka hor imaado.
Kulanka : Liverpool vs Bournemouth ?
Goota: 18:00 xiliga bariga afrika
Garoonka: Anfield oo qaada (54167) taageryal ah
Garsoorka: Howe, Eddie
Diwaanka xaqiiqooyinka labada koox ee la daabcay:
Liverpool ayaa guuldaro la’aan ah marka ay wajaheyso kooxda Bournemouth iyada oo lagu ciyaarayo qalcada Anfield, waxaana u diwaansan shan guul ah iyo bareejo dhamaan tartaamada.
Kulanka kaliya ay Bournemouth ka adkaato reds Taariikhda waxa ay aheyd December 2016 markaas oo lagu ciyaarayey garoonkooda ciyaar ku idlaatay 4 iyo 3.
Liverpool waa kooxda kaliya ee badisay 33-kulan oo xiriir ah kulamada garoonkeeda walina loogama adkaan . sided kamida ay badiyeen sagaalkii kulan ee ugu dambyeye ee ay ku ciyaareen garoonka Anfield.
Inkastoo ay goolal la hormartay labadii kulan ee ugu dambeeyay Premier League, Liverpool ayaa bar-baro wada gashay labada kulanba. Weli ma dhicin taariikhda inay Saddex kulan oo xiriir ah goolal la hormarto misane ay guul gaari wayso.
Mohamed Salah ayaa dhaliyey shan gool sedex kulan oo uu wajahay kooxda Bournemouth, iyada oo lagu darayo in kulankii ugu dambyey oo sedexleey ka dhaliyey .
Sadio Mane ayaa goolal dhalinayay saddexdii kulan ee ugu dambeeyay Premier League, weligii afar kulan oo xiriir goolal ma dhalin horyaalka isla hal xilli ciyaareed.
Shaxda macquulka ah :
Hordhac : Liverpool vs Bournemouth halkan ka aqriso wax kasto oo ku saabsan kulanka . added by admin on 09/02/2019